မန္တလေးတွင်ဘုရားကျောင်း | မြန်မာသွားရောက်ကြည့်ရှု
တစ်ကိုးကွယ်မှုဗုဒ္ဓဘာသာမြို့မန္တလေးဖြစ်ခြင်း, မြန်မာနိုင်ငံတွင်ဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့, ၏သဘာဝအပြည့်အဝဖြစ်ပါသည် ဗုဒ္ဓဘာသာဘုရားသုံးဆူ, ဘုရားကျောင်းနှင့်ဘုန်းကြီးကျောင်းများ. သင်ပင်အနည်းငယ်ဒီမှာအလည်အပတ်ခရီးအပြီးထွက် templed ရစေခြင်းငှါ. သင်ထင်လျှင်မူကားထိုသူတို့တွင်များစွာသောသူတို့ကိုစာရေးတံကဒီမှာရှိတယ်, သငျသညျကိုဆင်းပုဂံကိုသွားမှီတိုင်အောင်စောင့်ဆိုင်း, ပိုပြီးစာရေးဘို့ပြင်ဆင်ရမည်.
ကဘုရားသုံးဆူတည်ဆောက်ရန်မြန်မာအများအပြားရှေးခေတ်ဘုရင်များများအတွက်ပုံမှန်အလေ့အကျင့်ခဲ့စဉ်မှာ, သူတို့ပြုသူသာသူမြားကိုမဗုဒ္ဓဖို့ကောင်းသောအကျင့်ကိုအဖြစ်ဘုရားကျောင်းနှင့်ဘုန်းကြီးကျောင်းများ. ဒါဟာအစမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်တက်ချပြီးနှင့်အထွေထွေလူဦးရေကအသုံးပြုခံရဖို့သူတို့ကိုလွတ်လပ်စွာရရှိနိုင်အောင်အားဖြင့်ရှုခင်းအထောက်အကူပြုဖို့ကောင်းသောအချိန်များပေါ်မှာလှဲသောသူကျောက်စိမ်းကုန်သည်များစသည်တို့ကဲ့သို့အဒေသခံချမ်းသာကြွယ်ဝလူများအတွက်အဆန်းမဟုတ်ခဲ့.
သငျသညျအနညျးငယျမြင်ကြပြီနောက်မှသင်သည်ထိုသူအပေါင်းတို့အရွယ်အစားကွဲပြားကြောင်းသတိထားမိပါလိမ့်မယ်, အဆောက်အဦးပစ္စည်းများနှင့်စတိုင်များ. တချို့ကကိုယ့်သေးငယ်တဲ့သဲကျောက်ထွင်းထုစေတီပုထိုးများဖြစ်ကြသည်, အချို့သောကြီးမားသောကျောက်ဘုရားကျောင်းနှင့် Shwenandaw ကျောင်းနဲ့တူအခြားသူများကိုမေတ္တာနဲ့ကျွန်းသစ်ကနေဖန်ဆင်းတော်အပေါင်းတို့နှင့်တကွကျော်ထွင်းထုကြသည်များမှာ. တချို့ကသေးငယ်တဲ့အိမ်၏ဧရိယာကိုဖုံးလွှမ်းခြင်းနှင့်အချို့တစ်မြို့ပိတ်ပင်တားဆီးမှု၏အရွယ်အစားများမှာ.
အဆိုပါအဆောက်အဦ၏ A ကောင်းဆုံးအရေအတွက်ကိုပတ်လည်မှာတညျဆောကျခဲ့သညျသို့မဟုတ်မင်းတုန်းမင်းမန္တလေးနှစ်လယ်ပိုင်း 1850 ရဲ့၌သူ၏မြို့တော်ကိုဖန်ဆင်းမယ့်အပြီး, ပွောဆို 160 လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာ. သို့သျောလညျး, အဲဒါကိုမြို့တော်ဖြစ်ခဲ့သည်မတိုင်မီမန္တလေးအဲဒီမှာအချိန်ကြာမြင့်စွာခဲ့သည်. သငျသညျတော်ဝင်နန်းတော်ကျုံး၏အနောက်ဘက်ခြမ်းရွှေကြည်မြင်သာစေတီတော်မှာကြည့်သွားနှင့်ရှိပါကသင်ကဖြစ်ကောင်းမန္တလေးမြို့များတွင်အနည်းဆုံးလည်ပတ်ခဲ့ပေမယ့်အသက်အကြီးဆုံးစေတီပုထိုးများ၏တဦးတည်းကြောင်းတွေ့လိမ့်မည်, ကျော်တညျဆောကျခံရ 700 လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာ.
Kyauktawgyi စေတီတော်ကဲ့သို့အခြို့သော & တော်ဝင်နန်းတော်ရဲ့ Norh အရှေ့ထောင့်မှာကျောက်ဖြူ Taw Gyi စေတီတော်များကဲ့သို့အခြားသူများကိုလူအပေါင်းတို့သည်အရောင်အလင်းအိမ်နှင့်အတူညအချိန်တွင် dazzle နေတုန်းအမရပူရအတွက် Pahtodawgyi စေတီတော်ထွန်းတောက်လငျး၌ပြိုးပြိုးပြက်ပြက်ဖြစ်ကြသည်.
သင်သာရက်အနည်းငယ်တည်းခိုနေကြရင်တောင်သူကထွက်နှင့်ရှေးဟောင်းဘုရားသုံးဆူဤလှပသောဥပမာအချို့ကိုထုတ်စစ်ဆေးဖို့မသငျတို့လွှတ်ပါလိမ့်မယ်, သငျသညျမန္တလေးသွားရောက်ကြည့်ရှုသည့်အခါဘုံဗိမာန်များနှင့်ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများ, မြန်မာ.